Ololaha Doorashada Madaxtinnimada Waddanka Iran Oo La Soo Af-Jaraayo Maanta Iyo Musharaxa Xilka Lagu Waddo + Dadka Oo Codaynaaya.
Wednesday 17th May 2017 07:28:50 in Wararkii Maanta by Xafiiska Hargeysa
Ololaha doorashada madaxtinnimada waddanka Iran ayaa la soo afjarayaa maanta oo arbaco ah.
Codbiyeyaasha ayaa u dareeraya goobaha codeynta maalintii Jimcaha ah si ay go'aan uga gaaraan in markale ay soo dooranayaan madaxweynaha wakhtigiisu dhammaaday ee Xasan Rowxani.
Labo ka mid ah musharaxiinta lixda ah ayaa usbuucan tartanka isaga haray, taasi oo ka dhigan fursad uu ku soo bixi karo Xasan Rowxani.
Balse Xasan Rowxani ayaa loollan adag waxa uu ka soo wajhayayaa musharaxa mayalka adag ee Ibrahim Raisi, oo dhaliilsan waxqabadka dhaqaale ee madaxweyne Rowxani.
Cid kastaa oo ku guuleysata doorashada ayaa ugu dambeyn madaxweyne ka noqon doonta dalka Iran.
Labada musharax ee ugu culus tartanka ayaa heysta maalinkii ugu dambeeyay ee ay tahay in ay ku kasbadaan kalsoonida codbixiyeyaasha.
Xasan Rowxani waxa uu ka dharagsan yahay in uu tartan culus wajahayo.
Guusha ugu weyn ee uu gaaray muddadii uu xilka hayay ayaa ah heshiiskii uu la galay beesha caalamka ee lagu hakinayay kobcinta barnaamijka niyuukleerka iraan, arrintaa oo uu ku badalanayay in dalkiisa laga qaado xayiraadaha curyaamiyay kobaca dhaqaalaha.
Shaqa la'aanta ayaa wali aad u sareysa iyada oo dedaalada lagu soo jiidanayo maalgashiga shisheeyaha aysan miro dhalin.
Arrintan ayaana musharaxiinta mayalka adag ee uu ka mid ka yahay Ibraahim Raisi, siineyso fursad ballaaran oo ay wax ku dhaliilaan.
Haseyeeshee, Rowxani oo ka jawaabayay arrintaan ayaa ninka la tartamayo ku eedeeyay musuqmaasuq iyo tacaddiyo ka dhan ah xuquuqul insaanka, waxa uuna ballanqaadyo badan oo uu ku bedelayo maanka codbixiyayaasha u sameeyay dhallinyarada.
Haddii doorashadu uu ku soo baxo Xasan Rowxani, tallaabooyinka taxadarka badan ee Iran ay u qaadeyso dhanka caalamka ayaa la filayaa in ay sii socdaan. Haddiise uu guuldarreysto waxaa la arki doona muran badan oo ka dhan ah reer galbeedka, gaar ahaan maamulka Donald Trump.
Laakiin siyaasadda ku aadan arrimaha dibadda Iran ee markastaa uu muranka ka taagan yahay ee sida ku lug lahaansha malatari ee ay ku lug leedahay waddamada Ciraaq, Suriya iyo Yemen ayaa waxaa maamula hoggaamiyaha ruuxiga ah ee Aayatullah Cali Khamanii.
Cidkasta oo ku soo baxdo doorashada Jimcahan dhici doonta ayaa laga yaabaa in aysan waxbo ka badalin saameynta hoggaamiyahan ku leeyahay arrimaha dibadda ee Iraan.
[Daawo] Waa Sidee Xaalada Dadka Danyarta Ah Xilligan Ramadaanta?
Iranians look for hope in Europe's promises